Daawud Ibsaa: Bakka qaamni sadaffaan jirutti mootummaa waliin mari'achuuf qophiidha - BBC News Afaan Oromoo
Daawud Ibsaa: Bakka qaamni sadaffaan jirutti mootummaa waliin mari'achuuf qophiidha
Madda suuraa, Getty Images and Social
Haalli siyaasaa Itoophiyaa keessaa bifa ammaatiin yoo ittii fufeefi haqa qabeessa ta'e, gara biyyaatti galuun karaa nagaatiin qabsaa'uu barbaanna jedhu hayyuu dureen Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) Obbo Daawud Ibsaa.
ABOn paartiilee kaan waliin ta'uun qabsoo waggaa dheeraa gaggeessuun booda mootummaa Dargii kuffiisuun, mootummaa cehumsaa hundeessuu keessatti qooda fudhateera.
Haa ta'u malee, dantaalee garaagaraa irratti walii galuu dadhabnaan ABO'n chaartara keessaa bahuun qabsoo waraanaa biraa jalqabe. Haalli qabsoo kunis waggoottan 27 darban keessatti aarsaa lubbuufi qabeenyaa hedduu gaafachuusaa himu hayyu-dureen kun.
ABO'n jijjirama siyaasaa Itoophiyaa keessaa akkamiin ilaala?
Jijjirama siyaasaa ammaan tana Itoophiyaa keessatti uumamaa jiruun dhaabbileen siyaasaa biyyoota birootti bu'ureefachuun qabsoo gaggeessaa turan tokko tokkoos gara biyyaa ilaaluu eegalaniiru.
Miseensonni ABO duraaniifi booda keessa paartilee biraa dhaabbatanis ni jiru. Haa tahu malee dhaabni siyaasaa seenaa qabsoo uummata oromoo keessatti bara dheeraaf beekamu ABO'n haala siyaasa biyya keessaa akkamiin akka ilaalu Obbo Daawud akkasiin himu.
''Jijjiramni amma mul'atus akkaata qabsoofi aarsaa uummanni barbaaduun ta'uu baatus, ADWUI'n keessoosaa haaromsuuf dirqamee kan raawwatedha. Haala akkasitiin malee qaamooleen sirnicha keessa jiran itti fufuu waan hin dandeenyeef raawwataniiru'' jedhaniiru.
Haa ta'u malee ammayyuu caasaawwan kan akka human waraanaa dabalatee kanneen haala barbaadamuutti hin tuqamiin jirus jedhaniiru.
Hidhannoo hiikanii qabsoo karaa nagaa gaggeessuu
Mootummaa naannoo oromiyaa dabalatee muummichi ministera Dr Abiy Ahimed dhaabileen qabsoo waraanaa gaggeesan karaa nagaa gara biyyatti deebi'uun qabsoo nagaa akka itti fufaniif waamicha dhiyeessaniiru.
ABO'nis waamicha kana ni fudhata garuu dogogora bara 1992 irraa barumsa guddaa waan fudhateef bu'aa siyaasaa argachuuf qofa miidiyaan haasa'uu osoo hin taane haala qabatamaan itti galamu qaba jedhu Obbo Daawud.
Kana malees, humni waraanaa qindaa'ee jiru maal ta'uu akka qabuufi gahee dhaabbichi siyaasa biyyattii keessaatti qabu yoo murtaa'e malee akkasumaan fiigne hin galluus jedhaniiru.
Haala kana dhugoomsuuf ammoo mootumaa Itoophiyaa bakka qaamni sadaffaan jirutti waliin marii gaggeessuuf hojjechuu qaba jedhan, obbo Daawud.
ABO'n dhaaba shororkeessaa jedhamuun mootummaa Itophiyaan tarreefammeera. Galmee kana jalaa osoo hin bahiin akkamiin gara biyyaatti deebi'uun danda'ama kan jedhan Obbo Daawud, kunis nutti osoo hin taane mootumaama Itoophiyaattu gufuu waan ta'uuf kaasu qaba jedhaniiru.
Kanaafis sababa yoo eeran, ''Namoonni miseensa paartii keenyaa hin taaneefi hariiroo hin qabne hedduun maqaa ABOn shororkeessaa jedhamuun waan hin beeknetti reebamaafi ajjeefamaa turaniiru,'' jechuun BBC'tti himaniiru.
Karaa nagaatiin biyya keessatti biiroo banachuun qabsaa'uun kan danda'amu ta'ee, gaggesitoonni paartiilee siyaasaa biyya keessaa hidhaatti hin guuraman ture. Ammas waanti jalqabe kun kan itti fufu yoo ta'e, ABOnis siyaasa biyyittii keessatti qooda akkamii qabaachuu danda'a kan jedhu irrattis yoo walii galle gara biyyaatti deebi'uuf qophii dha jedhan.
Paartiin ABO meeqatu jiru?
Gaaffii ABO'n paartiilee garaa garaatti qoodamee jiraa jedhuuf deebii yoo kennan, kun dhaabbatichi erga hundaa'ee waggoota dheeraa kan lakkofsise waan ta'eef yaadoota tokko tokkorratti walii galamuu yoo dadhabamu kan uumamuu danda'udha jedhan.
Paartiileen akka ADO fi paartii Gurmuu Siyaasaa Birgaader Jeneraal Kamaal Galchuun hogganamu eeruun ni danda'ama. Isaanis qooda siyaasaa mataasaanii qabu, jedhu Obbo Daawud Ibsaa.
Haa ta'u malee, ABO'n ammayyuu akka dhaaba seenaa qabeessaatti maqaa fi kaayyoo uumataa Oromoof duraan qabatee manaa baheen qabsaa'aa jiraa jedhan.
Araarri Itoophiyaafi Ertiraa ABO miidhu danda'aa?
Mootummaan Itoophiyaa mootummaa Ertiraa waliin nagaa buusuuf walii galtee Aljeersii hojiirra oolchuuf murteessuunsaa ibseera.
''Kana hordofuun ammoo carraan buufata qabsoo ABO maal ta'uu danda'a yaada jedhuuf, ''Qabsoon ABO Ertiraatti hin jalqabne. Kana malees rakkina gurguddaa bara 1992 yeroo chaartaraa baanu nu mudatee fi waraana ariifachiisaa nurratti labsame jalaa baanee, har'as uummata waliin gaaffii fi qabsoo keenya waan itti fufne jirruuf nu hin yaadessu,'' jedhan.
Miseensi keenyaa fi qabsoon keenya uummata keessa waan ta'eef, osoo namootni muraasa Ertiraa keessa jiran hundi qabamanii hidhamaniiyyuu, dhiibbaan inni qabsoo Oromoo irratti qabu %1 hin caalu jedhan.
`Walitti bu'iinsa Najjoo fi Mandiitti ta'een lubbuun darbe
14 Waxabajjii 2018
'Shororkeessummaan taayitarra turuuf uummata dararuu dabalata'
Yeroo dhuma kan haaromfame: 1 Sadaasa 2018